Waakee ciyaaryahanka ugu fiican Premier League & kooxda horyaalka ku guuleysan karta xili ciyaareedka soo socda?… Waxaa ka jawaabaya Iniesta – Gool FM
Waakee ciyaaryahanka ugu fiican Premier League & kooxda horyaalka ku guuleysan karta xili ciyaareedka soo socda?… Waxaa ka jawaabaya Iniesta
(England) 31 Luulyo 2019. Kabtankii hore kooxda Barcelona ee Andres Iniesta ayaa carabka ku adkeeyay inuu ka shaqeenayo sida uu ku noqon lahaa tababare, balse uu arko in xiligan aan la taagneyn waqtigeeda, sababa la xiriiro inuu wali xiiseenayo inuu sii wado ciyaarista kubadda cagta.
Dhinaca kale Andres Iniesta ayaa wuxuu ka hadlay xiddiga uu u arko inuu yahay kan ugu fiican Premier League, iyo kooxda ku guuleysan karta xili ciyaareedka soo socda horyaalka England.
Wareysi uu la yeeshay Andres Iniesta shabakada“DAZN” ayaa wuxuu sidoo kale ka hadlay heshiiska uu Eden Hazard ku yimid kooxda Real Madrid suuqan xagaaga, isagoo sheegay inuu yahay xiddig sameyn kara isbadal.
“Hazard waa ciyaaryahan isbedel sameyn kara, waa ciyaaryahan dhameystiran, wuxuu ku ciyaari karaa lugta bidix iyo tan midig, wuxuu leeyahay xawaare iyo awood”.
Intaas kaddib Andres Iniesta ayaa la weydiiyay su’aal ah xiddiga uu u arko inuu yahay kan ugu fiican horyaalka Premier League wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay David Silva, kaasoo uu ka tagi doono Manchester City dhamaadka xilli ciyaareedkan.
“In kasta oo ay jiraan ciyaartoy badan oo aad u wanaagsan, waxaan dooran doonaa David Silva”.
Ugu dambeyntii Andres Iniesta ayaa wuxuu hadalkiisa ku soo xiray in kooxda u sharaxan inay ku guuleysan karta horyaalka Premier League xili ciyaareedka soo socda ay tahay Manchester City.
“Waxaan iska diiday inaan ku biiro Real Madrid laba jeer” - Carles Puyol